थेरापी | काव्यालय
थेरापी | SATURDAYकलम | Kavyalaya - काव्यालय
by अनुपम पोखरेल July 11, 2020
धुम्म आकाश थियो । पानी पर्ला पर्ला जस्तो । परिहाल्न भने नसकेको । विरक्त लाग्दो । दिनलाई नै मानौँ, कन्सटिपेसन भएको छ । केटो मैले बोलाएको क्याफेमा आइपुग्यो । हिजो राती मेसेजमा भन्थ्यो, “मलाई गाह्रो भयो । कुरा गर्नु छ ।”
जिन्दगी जिउँदै जाने क्रममा जब जब मनभित्र कस्सिएजस्तो हुन्छ, केही गुजुल्टिएर गाँठो पर्छ तब तब सकस महसुस हुन्छ । जसलाई फुकाउन पर्छ । हो, त्यहि सकसको गाँठो फुकाउने मेरो काम । गाँठोभित्र गुजुल्टिएर बस्ने त्यो के चिज हो ? त्यो पक्कै त्यहि सकस नै हो, जो गाँठो फुक्नासाथ उडेर विलाउँछ, चिताग्निबाट उडेको धुवाँझैं । धुवाँ उडेसँगै फर्किन्छ शितलता, शान्ति र आनन्द हृदयभित्रको । म त्यहि धुवाँ उडाउने काम गर्छु ।
हुन त डिजिटलाइज्ड जमाना छ । तर च्याट वा मेसेजमा कुरोको चुरो पत्ता लगाएर यो मनभित्रको ‘गाह्रो’ फ्याँक्नु बहुत गाह्रो काम हो । मान्छे इन्स्ट्यान्ट सोलुसन चाहन्छ । केटो च्याटबाटै मैले केही मन्त्र दिइहालौँ र त्यो जप गरेर उसले शान्त महसुस गरिहाल्न पाओस् भन्ने ताकमा हुँदो हो । त्यस्तो कहाँ हुन्छ र मनमा खार जमाएर गाँठो परिबसेको धुवाँ उडाउने काम ! मनमा असुर बनेर बसेको काँडा गाडिएर पो नाशुर बनेको हो । बेलैमा झिकेको भए नाथे काँडो ! त्यो भित्र…. गाडिएको काँडो निकाल्नपनि त भित्रै छिर्नु पर्छ । भित्र छिर्न मान्छे आफैँ अगाडि उपस्थित हुनुपर्छ । व्याधित र वैद्यको साक्षातकार हुनुपर्छ ।
ब्ल्याकबोर्ड भएको रहेछ उसको अनुहार निराशाले । तै, मुस्कुराउँछ उल्लु ! नक्कली मुस्कान ! भित्रभित्रै उम्लिरहेको ज्वालामुखी सक्दो लुकोस् भन्ने चाहन्छ । यही त हो मान्छेको अप्ठ्यारो; बाहिर हाँसी भित्र रुने बानी ! रुन मन लागेको बेला रोइदिए त सक्किगो’ नि ! कोही हुन्छन् बिथोल्ने । तर मेरो काम हो खोतल्ने, बिस्तारै…प्रेमपूर्वक….उसले लुकाइरहेका कुरा र उसैलाई देखाइदिने ! मानौँ, ऊ मलाई सुम्पिदिन्छ एउटा चक्रव्यूह र दिन्छ चुनौती उल्झन सुल्झाएर देखाउने । पत्ता लागाएर देखाउने कि उसले के लुकाई रहेको छ मसँग र उसको आफ्नै ‘म’ सँग पनि ! हो, कतिपल्ट आफैँलाई थाहा हुँदैन, आफूले के लुकाइरहेको छु भनेर । त्यहि मेरो काम । पर्दा उघार्ने, उज्यालो देखाइदिने । राक्षस नाचेको छ मेरो दिमागमा भन्नेहरुलाई, “आऊ, एउटा बत्ती बालौँ अनि तिम्रो दिमागको अँध्यारा गल्लीमा भौँतारिऔँ हामी हातमा हात समाउँदै, गीत गाउँदै । तिम्रा राक्षस, मात्र अन्धकारमा राक्षस हुन् । उज्यालोमा त ती पाल्तु कुकुर बनेर लुटुपुटु हुन आउँछन् ।” भनेर भन्ने ।
हामी सेसनमा बस्यौँ । केटोले अमेरिकानो मगायो । मैले भनेँ, “डबल सट ।” उसले भन्यो, “हुन्छ ।” र तत्काल वचन निभायो ।
म उसका ट्रिगरहरु चेक गर्न थालेँ । मैले हेर्नु छ, के भन्दा ऊ एक्कासि झसङ्ग हुने छ । त्यहि उसले दबाएर, लुकाएर राखेको कुरो हुने छ । र मैले त्यहि कुरोलाई उन्नु छ र तान्नु छ बाहिर, निकाल्नु छ र मिल्काइदिनु छ । मैले उसको घरको हालखबर सोधेँ । केटो मुस्कुराउँदै कुरा गर्न थल्यो । मानौँ उसलाई केही भएकै छैन । ऊ मुस्कुराइरहनु मेरो विफलताको सङ्केत हो । मैले त उसलाई झस्काउनु, तर्साउनु छ । म घरबाट बाहिर निस्किएँ र जागिरतिर लागेँ । उसको तलब बढेको रहेछ केही महिना यता । मुस्कुराउन खोजेझैं भन्यो । उसलाई बधाई दिएँ र आफूलाई पुनः गिज्याएँ विफल हुन सफल भएकोमा । उसको जागिरे जिन्दगीपनि छिचोलेर अघि बढेँ । पढाइ, साथीभाइ, सपना र योजनाहरु ! करिब एक घण्टाजति कुरा गरेपछि बल्ल एउटा प्रश्नले ऊ भड्कियो । ऊ भड्कनासाथ मैले चोर पक्रिहालेँ । यो सवालको अगुल्टो घोचेर धुवाँ उडाउने काम त अँध्यारोमा तिर हान्नुजस्तै, मान्छेले भन्ने गरेको भाग्यजस्तै । ठाउँमा लागे मात्र ढल्ने ।
सोधेको थिएँ मैले, “जब तँ कसैलाई केही दिन्छस्, मानौंँ सबैभन्दा धेरै दिइस्, आफ्नो कति प्रतिशत दिन्छस्? अनि तैँले दिएको कुरा लिनेले त्यही उत्साहमा लिएन भने तँलाई कस्तो महसुस हुन्छ ?” केटो जङ्गियो ! “के उट्पट्याङ्ग प्रश्न सोध्दै बसेको !” मानौँ ऊ भित्रको राक्षस एक्कासि जाग्यो । यो ऊ होइन जो मैले चिनेको हुँ । यो उसको त्यो पाटो हो जो उसले दबाएर राख्न खोज्दैछ । यसबेला यसरी जागेका राक्षस शान्त बनाउने मेरा आफ्ना केही तरिका छन् । तरिकालाई परिकार बनाएर पस्किएँ । अमेरिकानोको चुस्कीसँगै उसले ती तरिकापान पनि गर्यो । गराएँ भनौँ । मेरो काम अब लगभग सकिएको थियो । म डबलसट अमेरिकानो सुरुप्प पार्दै, क्याफेको सिसाबाट त्यो चिसो साँझको रोगन नियाल्न थालेँ । धुम्म आकाशका बादल चुहुँला चुहुँलाझैं कालानिला देखिन्थे ।
धेरै हिँडेर गलेकोजस्तै, थकित लवजमा ऊ बर्बराउन थाल्यो, आफै, अन्धाधुन्ध, “थाहा छ ? मामाघरमा दही च्युरा खाने निम्तो थियो । खसीको मासु पकाएका थिए । मेरो फेभरेट ! त्यहिपनि म गइनँ ।”
यसरी बर्बराउन थालेको बेला मान्छे क्षणभरलाई बच्चा भइदिएको हुन्छ । बच्चाका गुनासा सुनेर नहाँस्नु । उसलाई नउडाउनु । जज नगर्नु । अत्यावश्यक नपर्दासम्म आफू नबोल्नु । उसका कुरा सुन्नु मात्र ! पानी पर्न थाल्यो । माटो चुम्दै गरेका पानीका पहिला थोपाको मिठो बास्ना ल्याउँदै थियो अब हावाले ।
“केटी, मैले एउटा हार्ट इमोजी पठाउँदा उत्तरमा दुईवटा पठाउँथी । उसले पठाएको हार्ट इमोजी अरुले पठाएको भन्दा गहिरो लाग्थ्यो ।”
“केटी को नी ?”
“छिमेकी रहिछे । लकडाउनको बेला चिनेको । बाहिर निस्किन नमिल्ने । साँझपख म चुरोट खान छतमा जाँदा ऊपनि छतमा हुन्थी । फेसबुकमा साथी बनियो । च्याट गर्न थालियो । कबिर सिंहको गीत मनपर्छ के भनेकी थिई म दिनरात ‘तु इतना जरुरी कैसे हुवा’ सुन्न थालेँ । लकडाउन हल्का खुकुलो भएपछि हिम्मत जुटाएर एक साँझ सोधेँ, ‘भोलि डेट जाने?’”
“उसले हुन्छ भनी । हार्ट इमोजी पठाई । दुईवटा त्योपनि ! म रातभर पहिलो डेटमा कसरी इम्प्रेस गर्ने टाइपका देखि सन्दीप माहेश्वरीका मोटिभेसनल भिडियोसम्म हेर्दै बसेँ । रातभर सुतिनँ, सुत्नै सकिनँ ।”
“उसले के भन्ली र म के भनौँला भनेर अभ्यास पनि गरेँ । बेलुका डेटमा जाने लुगा बिहानै तयार पारेँ ।”
“मोटरसाइकलमा सयको पेट्रोल हाल्थेँ सधैँ । त्यो दिन पाँच सयको हालेँ । मोटरसाइकलको टायर फेरेँ, पाँच हजार खर्च गरेर । साथीलाई भनेर एउटा रेष्टुरेन्टमा टेबल बुक गर्न लगाएँ । बेलुनहरु राखेर डेकोरेट पनि गर्न लगाएँ ।”
“आठ सयको चकलेट लिएर गएँ उसैका लागि । यो मन नपरे त्यो खाली भनेर, थरीथरीका चकलेट !”
“चार घण्टा कुरेँ रेष्टुरेन्टमा उसको लागि । दिन धकेल्दै साँझ आयो, अँध्यारो आयो तर अँह, ऊ आइन !”
“न फोन न टेक्स्ट । मैले फोन गर्दासमेत उठाइन । घर फर्किएँ । पेटमा कसैले जमाएर लात हानेको जस्तो, वाकवाकी आउँलाजस्तो भइरह्यो, फर्कंदै गर्दा । राती उसको टेक्स्ट आयो । सरी, पिरियड भएकोले आउन पाइनँ ।” यति भन्दाभन्दै उसको अनुहार निचोरियो । फेरि सम्हालियो ।
“मैले ज्यानै दिएँ । उसले ज्यान हत्केलामा लिई, भुइँमा मिल्काई अनि त्यसलाई जुत्ताले कुल्चीदिई ।”
रुन्चे आक्रोश थियो उसको आवाजमा र आँखामा आँसुपनि थियो अब ।
“अझै भनौँ ? जब कसैलाई दिँदा म कति दिन्छु भनेर ? अनि मैले दिएको कुरा ,कसैले त्यसै गरी लिईदिएन भने के हुन्छ भनेर ?”
आवेग बिसाइसकेर उसले टाउको निहुरायो, सायद आँसु पुछ्नलाई । मैले नदेखेझैं क्याफेको सिसातिर टाउको बटारेँ । झरी थामिएछ, आकाश सफा देखियो ।
क्षणभरको मौनतापश्चत, मैले केटोको हात समाएँ र भनेँ,
“तँजस्तो रोम्यान्टिक मान्छे दुर्लभ छन् संसारमा हेर् भाइ । ठूलो ट्रिट मिस गरी केटीले ।”
“केटीहरु त्यस्तै हुँदा रहेछन् ।” उसले भन्यो ।
“त्यस्तो हैन । शायद उसको केही समस्या थियो होला । ऊ आइन, त्यो उसको प्रोबलम हो । तँ कसैलाई केही दिँदा हदैसम्म दिन सक्दो रहेछस्, त्यो तेरो क्षमता हो । कसैको समस्याको कारण तँ आफ्नो क्षमता वाटर डाउन किन गर्छस् ?”
त्यसो त अरुपनि धेरै कुरा मैले भनेँ । उसले पनि धेरै कुरा अरु भन्यो । तर अब उसको मुहार उज्यालो थियो । उसको मनभित्रबाट कालो धुवाँको खार भागिसकेको थियो ।
मनले म राम्रो मान्छे हुँ भनेर बुझ्नु जरुरी छ । तर अरुपनि नराम्रा मान्छे होइनन् भनेर बुझ्नु उत्तिकै जरुरी छ । केटोले आज गीताको कर्म योग बुझ्यो । ठिकै छ, फेरि फेरि बिर्सिएला, तर मेरो काम नै सम्झाउने हो । ऊ मेरो क्लाइन्ट र म उसको थेरापिस्ट !
जून, गुलाब र प्रियसी